Harooyinka Waaweyn ee Mareykanka | Safarka Absolut
Isabella | | La cusboonaysiiyay 11/03/2021 10:59 | USA
Xuduuda udhaxeysa Kanada iyo Mareykanka waxaa kuyaala shan harood oo waawayn oo xukuma dhulal waawayn halkaasoo biyaha ugu macaan badan ee meeraha ku urursan.: Michigan, Superior, Ontario, Huron iyo Erie. In kasta oo ay u dhaqmaan sida badaha xidhan, haddana biyahoodu waa kuwo cusub oo ay ku jiraan wax aan ka yarayn shan meelood meel dhulka kaydka ah.
Shantan haro oo waaweyn waxay bixiyaan maylal badan oo xeebo ah, buuro dhaadheer, godad waaweyn, laydh fara badan, jasiirado ku yaal xeebta iyo magaalooyinka dalxiiska. Layaab ma leh in loogu yeero "xeebta saddexaad" maaddaama harooyinkani yihiin meesha ay ku noolyihiin noocyo kala duwan oo xayawaan ah. Intaas waxaa sii dheer, doomaha noocyadooda kala duwan waxay ku shiraacaan fiditaanadan ballaaran ee biyo macaan waana wax iska caadi ah kaluumeysatada iyo kuwa jecel karak inay ku dhex darsamaan doomaha shiraaca ah, kuwa xamuulka qaada, doonyaha waaweyn, iwm.
Booqashada shanta harood ee waaweyn ee ku yaal Ameerika waa fikrad aad u wanaagsan oo loogu talagalay dalxiis dalxiis. Hadday tani tahay kiiskaaga oo aad jeclaan lahayd inaad soo booqato, markaa waxaan wax badan ka ogaan doonaa cajaa'ibyadan dabiiciga ah.
1 Harada Michigan
2 Harada sare
3 Harada Ontaariyo
4 Harada Huron
5 Harada erie
Harada Michigan waa mid ka mid ah shanta haro ee waaweyn ee dalka Mareykanka laakiin waa tan kaliya ee gebi ahaanba dalka gudihiisa ka jirta maadaama kuwa kale lala wadaago Kanada. Waxay ku wareegsan tahay gobollada Wisconsin, Illinois, Indiana iyo Michigan, oo loogu magac daray harada lafteeda.
Haradaasi waxay leedahay bed dhan 57.750 kiiloomitir oo isku wareeg ah iyo qoto dheer oo ah 281 mitir. Waxaa loo tixgeliyaa harada ugu weyn dal dhexdiisa iyo tan shanaad ee adduunka. Cabirkeedu waa 4.918 cubic km oo biyo ah harada Michigan waxay wax ka qabataa jardiinooyin iyo xeebo badan.
Qiyaastii 12 milyan oo qof ayaa ku nool xeebaheeda, in badan oo ka mid ah waxay ku nool yihiin goobo dalxiis oo yar yar oo ku nool fursadaha harada Lake Michigan ay bixiso. Bixinta maalinta booqashada harada waa fikrad fiican inaad ku raaxeysato dabeecadda banaanka, nasashada iyo ka goynta jadwalka caadiga ah. Qorshe aad u xiiso badan ayaa ah inaad fuulato doon si aad uga gudubto harada. Intaa ka dib, waxba kama fiicna tijaabinta cunnada maxaliga ah ee hodanka ku ah kalluunka salmon iyo kalluunka.
Xeebta harada Michigan, ee gobolka Illinois, waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan Mareykanka: Chicago. Waxaa loo yaqaan Magaalada Dabeylaha, waa magaalada seddexaad ee ugu dadka badan Mareykanka, marka laga reebo New York iyo Los Angeles.
Waa magaalo casri ah oo si guud loo wada yaqaan oo hoy u ah in ka badan 1.100 dabaqyo dhaadheer. Waqtigan xaadirka ah dhismaha ugu dheer waa Willis Tower (oo horey loo oran jiray Sears Tower), laakiin sanadihii 1920-meeyadii wuxuu ahaa Wrigley Building, oo dhismihiisa la naqshadeeyay wixii ka dambeeyay Giralda ee Seville.
Haradaani waxay xuduud la leedahay Minnesota, Wisconsin, iyo Michigan dhanka Mareykanka iyo Ontario dhanka Canada. Qabiilka Ojibwe ayaa u bixiyay Gichigami oo macnaheedu yahay "biyo aad u weyn" waana harada biyaha macaan ee ugu weyn adduunka. Si aan fikrad kaaga siiyo cabirkeeda cajiibka ah, Harada Sare waxay ku jiri kartaa mugga dhammaan harooyinka waaweyn iyo seddex kale oo la mid ah harada Erie. Waa kan ugu qoto dheer, ugu weyn, uguna qabow Harooyinka Waaweyn ee Mareykanka.
Xiisad ahaan, duufaanka Harada Sare waxay soo saaraan mowjado rikoodh ah oo ka badan 6 mitir, laakiin hirarka in ka badan 9 mitir ayaa la duubay. Cajiib!
Dhinaca kale, harada dhexdeeda waxaa ku yaal dhowr jasiiradood oo kuwa ugu waaweyn ay yihiin Jasiiradda Royale ee gobolka Michigan. Kani markiisa waxaa kujira harooyin kale oo ay kujiraan jasiirado. Si kastaba xaalku ha ahaadee, jasiiradaha kale ee waaweyn ee caanka ah ee loo yaqaan Lake Superior waxaa ka mid ah Jasiiradda Michipicoten oo ku taal gobolka Ontario iyo Madeline Island oo ka tirsan gobolka Wisconsin.
Taa bedelkeeda, harada ugu yar ee harooyinka waaweyn ee Mareykanka waa Lake Ontario. Waxay ku taal meel ka fog bariga harooyinka kale waxayna ka tirsan tahay Kanada iyo Mareykanka labadaba: qaybta woqooyi ilaa gobolka Ontario iyo qaybta koonfureed ee gobolka New York.
Sida Lake Superior, waxay kaloo leedahay dhowr jasiiradood, tan ugu weyni waa Jasiiradda Wolfer, oo ku taal meel u dhow Kingston oo laga galo wabiga St. Lawrence.
Haddii aan ka hadalno xarumaha dadku ku badan yahay ee ku teedsan harada Ontario, waxaan ka helaynaa dhinaca galbeed ee dhinaca Kanada inuu jiro isku imaatin weyn oo loo yaqaan 'Golden Horseshoe' oo hoy u ah qiyaastii 9 milyan oo qof ayna ku jiraan magaalooyinka Hamilton iyo Toronto. Dhinaca Mareykanka, xeebteeda inta badan waa reer miyi marka laga reebo Rochester oo ka tirsan Gobolka Monroe (New York).
Gudaha, qiyaastii 30 kiilomitir, waxaan ka heli karnaa magaalada Syracuse waxayna ku xiran tahay harada kanaal. Qiyaastii 2 milyan oo qof ayaa ku nool dhinaca Mareykanka.
Harada Huron waa mid kale oo ka mid ah Harooyinka Waaweyn ee Maraykanka, gaar ahaan cabir ahaan waa tan labaad ee ugu weyn shanta iyo tan afraad ee ugu weyn meeraha. Ka weyn dhammaan Croatia! Waxay ku taalaa inta udhaxeysa Mareykanka iyo Kanada, aagga bartamaha Waqooyiga Ameerika waana mid ka mid ah kuwa ugu booqashada badan qurxinta dhulkeeda quruxda badan, gaar ahaan dalxiisayaasha.
Harada Huron waa meesha ay doorteen dad badan oo Mareykan ah inay ku qaataan fasaxooda. Inta lagu jiro bilaha xagaaga, dalxiisyada waxaa lagu abaabulaa hareeraha hareeraha si loo barto dabeecadda maxalliga ah iyo sidoo kale meelo taariikhi ah oo ku dhow harada Huron, sida Lighthouse. Booqashooyinkan ayaa u oggolaanaya dadka soo booqda inay wax yar ka bartaan taariikhda meeshan oo ay si faahfaahsan u bartaan khasnadaha dabiiciga ah.
Intaas waxaa sii dheer, waxaa sidoo kale jira howlo biyo ah sida kayaking ama quusitaanka biyaha lagu qubeysto. Xitaa socodka iyada oo loo marayo mid ka mid ah kumanaan jasiiradood oo harooyinkaasi leeyihiin. Markay yihiin meel aan la geli karin, dadku way ku qanacsan yihiin inay ku hareeraysan yihiin sida caanka caanka ah ee 'Turnip', oo ah midka ugu sawirada badan dhammaantood oo leh kaynta geedaha cad ee sare.
Xiisad ahaan, Harada Huron waxaa ka buuxa jasiirado, badankood waxay ku yaalliin woqooyiga, xudduudda xudduudka Kanada, inay tahay Manitoulin Island, tan ugu weyn meeraha harooyinka biyaha macaan.
Harada Erie waa dhanka koonfureed ee shanta harood ee waawayn ee Maraykanka waana kan ugu hooseeya. Waxay ku taal xadka Ontario ee Kanada waxayna u adeegtaa sidii soohdimaha gobollada Pennsylvania, Ohio, Michigan iyo New York ee dhinaca Mareykanka.
Cabirkeeda awgeed (waxay ku fadhidaa qiyaastii 25.700 kiiloomitir oo laba jibbaaran), waxaa loo tixgeliyaa inay tahay harada saddex iyo tobnaad ee dabiiciga ah ee adduunka. Si buuxda loo socon karo, waxay leedahay meel ka sarreysa heerka badda ee 173 mitir iyo celcelis ahaan qoto dheer oo ah 19 mitir; dareenkan, waa kan ugu hooseeya ee Harooyinka Waaweyn guud ahaan.
Waxay ahayd tii ugu dambaysay ee harooyinkii waaweynaa ee la soo helay oo sahamiyayaashii faransiiska ahaa ee sidaa sameeyay waxay ugu magacdareen harada Erie magac ka soo jeeda qoomiyad u dhalatay isla magacaas oo deegaankaas degan.
Sida harooyinka kale, waxaa kale oo kuyaala harada Lake Erie sidoo kale. Guud ahaan waxaa jira afar iyo labaatan, sagaal ka mid ah ay leeyihiin Kanada. Qaar ka mid ah jasiiradaha waaweyn waa Kelleys Island, South Bass Island, ama Johnson’s Island.
Dooni ahaan, Lake Erie waxay leedahay microclimate u gaar ah, taas oo ka dhigaysa aaggan mid hodan u ah miraha, khudradda, iyo geedaha canabka ah ee lagu sameeyo khamriga. Harada Erie sidoo kale waxay caan ku tahay barafkeeda Lake Effect oo ku tuuraya xaafadaha bari ee magaalada, laga bilaabo Shaker Heights ilaa Buffalo. Tani waxay dhacdaa xilliga qaboobaha iyo horraanta gu'ga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Harooyinka waawayn ee Ameerika
Kolkata, oo ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan Hindiya